Ufanele ukuba ubeka phi iinzame zakho zokuthengisa kwi2020? | Martech Zone
Qho ngonyaka, amaGosa aziiNtengiso aPhambili ayaqhubeka nokuqikelela kunye nokutyhala izicwangciso abazibonayo zihamba kubathengi babo. Unxibelelwano lwe-PAN luhlala lusenza umsebenzi omkhulu wokuqokelela kunye nokusasaza olu lwazi- kwaye kulo nyaka babandakanye oku kulandelayo, Uqikelelo lwe-CMO ka-2020, ukwenza lula.
Ngelixa uluhlu lwemiceli mngeni kunye nezakhono zibonakala zingenasiphelo, ndiyakholelwa ukuba banokubiliswa kancinci ukuya kwimiba emi-3 eyahlukileyo:
Inkonzo yomntu - Ithemba kunye nabathengi bafuna ukuzisebenzela, kwaye oko kufuna ukuba abathengisi benze umsebenzi ofanelekileyo wokubonelela ngomxholo ofunekayo, okwenza kube lula ukwetyisa, kunye nokubonelela naziphi na izixhobo ezongezelelweyo eziyimfuneko ukunceda ukukhokela uhambo lwabo.
Ukulungelelaniswa kweshaneli -Amathemba kunye nabathengi basebenzisa uninzi lweendlela ukuze babenolwazi ngeemveliso kunye neenkonzo-ukusuka kubameli beendaba zosasazo ukuya kusasazo lomxholo kunye nokunyusa. Uluhlu luyothusa kwaye luthengisa kakhulu kubathengisi namhlanje. Kolu qikelelo, uza kubona umxholo ogcweleyo yeyona nto ixhalabisayo. Abathengisi kufuneka basebenzise itekhnoloji, bangene kwiinkqubo ze-agile, kwaye baphinde babeke ulwazi olufunwa ngamashishini kunye nabathengi kuwo onke amajelo ukuba banethemba lokufikelela kwithagethi.
Ujoliso -Kunye nokuba yi-omni-channel, abathengisi kufuneka bajolise kwaye babhale umxholo ukuba banethemba lokuzibandakanya namathemba abanqwenela ukufikelela kuwo okanye abathengi abafuna ukwakha ixabiso ngakumbi nabo. Oku, kwakhona, kufuna izixhobo kunye nesicwangciso sokwenza oku. Ukuba inkampani ye-B2B, umzekelo, inokuphinda isebenzise iimeko zokusebenzisa, amaphepha amhlophe, kunye namaphepha okufika ukujolisa kwimizi-mveliso, izihloko zomsebenzi, okanye nakubungakanani beshishini, umxholo uya kufaneleka kwishishini elinokubakho.
Njengonxibelelwano lwe-PAN lushwankathela:
Umceli mngeni wokuqala okhankanyiweyo kuqikelelo lwalo nyaka yayikukukwazi ukusika ingxolo kwaye uhambise inqanaba lamava abathengi elifunwayo kwintengiso yanamhlanje.
Uqikelelo lwe-2020 ye-CMO: UkuQiniswa koMxholo, ukuBhengeza, iiDatha zabaThengi kunye nokwenza ubuNtu kuhlala ziPhambili
Akukho mathandabuzo. Ngaphandle kwetalente, oovimba, iinkqubo, kunye nesicwangciso sokudibanisa ezi njongo, inkampani yakho kunokwenzeka ukuba ixhonywe ngentambo ngelixa ivelisa iimfumba zezicwangciso ezingasebenziyo. Lixesha lokuba ubuye umva kwaye ufumane Inkqubo yentengiso e-agile oko kusebenza ngakumbi nangakumbi.
tags: UBrian Fanzoiicgsumxholo ogcweleyoidatha yomthengiDK New MediaUJason wavukamartech zonematt heinzNgokwezifisoUSteve krausubudala bempembelelothuliumintengiso ephezulu
Uqikelelo lwentengiso yaseKhaya lwango-2020 kunye neTrends